::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather त्रासै त्रासले घेरिएको छ वैदेशिक रोजगार:: Rojgar Manch ::
काशीनाथ कोइराला, निर्देशक, एबि इम्प्लोइमेन्ट सोलुसन प्रा.लि.
शनिवार, २०७३ भाद्र ०३ गते ००:२०
प्राय : संचारमाध्यममा देखिन नखोज्ने एबि इम्प्लोइमेन्ट सोलुसन प्रा.लि.का निर्देशक काशीनाथ कोइराला वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा खुलेर बोल्न चाहेनन् । रोजगारमञ्चले उनीसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनले एकै वाक्यमा जवाफ फर्काए ‘के बोल्नु र बोल्यो कि पोल्यो भन्ने स्थिति छ ।’ तर कुराकानीका क्रममा बिस्तारै खुल्दै गएका कोइरालाले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्न व्यवसायी संघले कुनै भूमिका नखेलेको र सरकारी नीति पनि व्यवहारिक नभएको भन्दै चरम असन्तुष्टि जनाए । साउदी अरबमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रम र समग्र वैदेशिक रोजगारको विषयमा रोजगारमञ्चका लागि दिनेश लुइटेलले गरेको कुराकानी :
हिजोसम्म नेपालीको पहिलो गन्तव्य मलेसिया थियो । तर आज मलेसिया तेस्रो स्थानमा झ¥यो भने साउदी अरब पहिलो गन्तव्य बन्न पुगेको छ । त्यही साउदी अरबमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न समस्या देखिन थालेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र खुम्चिदै गएको संकेत गरेको हो ?
पहिलो कुरा मलेसियाको बजार खुम्चनुका केही कारणहरु छन् । प्रणाली सही भएपनि प्रक्रिया नपु¥याई लागू गरिएको फ्री भिसा फ्री टिकट यसको मुख्य कारण हो । मलेसियाका सबै कम्पनीले फ्री भिसा फ्री टिकट नदिइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले एकतर्फिरुपमा लागू गराएको यो निर्णय मलेसियन कम्पनीलाई स्वीकार्य पनि थिएन । अर्कोतिर मलेसियाप्रति नेपालीको आकर्षण घट्नु मलेसियाका बारेमा सामाजिक संजालमा फैलाइने अफवाह पनि हो । सुरक्षाका दृष्टिकोणले केही संवेदनशिल मुलुक रहेपनि सामाजिक संजालमा फैलाइएको दुष्प्रचारले पनि धेरै नेपालीहरुले मलेसियाको विकल्प खोज्न थालेका हुन् ।
तपाइले साउदी अरबको पनि जुन प्रसंग उठाउनुभयो । समस्या साउदीका सबै कम्पनीमा देखिएका होइनन् र बाहिर प्रचारमा ल्याइए जस्तो हजारौ नेपाली कामविहिन हुने अवस्था सिर्जना भएको पनि होइन । साउदीमा एक–दुई ठुला कम्पनीमा कामदारले समयमा तलब नपाएका हुन । कच्चा तेलको मूल्यमा आएको भारि गिरावटका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको ति कम्पनीहरुले बताएका छन् । यस्तै केही कम्पनीहरु तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले बन्द समेत बनेका छन् । तर, साउदीका राजाले नै कामदारको तलब अबिलम्ब भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकाले तलब नपाइरहेका कामदारले चाँडै तलब पाउने संभावना बढेको छ । किनकि साउदीका राजाको निर्देशन भनेको त्यहाँको कानुन नै हो ।
यही समयमा हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले पनि पीडित कामदारको उद्धार गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । कामदारप्रति प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुले के संकेत गर्ला ?
देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियदले विश्वका जुनसुकै ठाँउमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि, समस्यामा परेका भए उद्धारका लागि निर्देशन दिनु कर्तव्य र दायित्व दुवै हो । आफ्नो नागरिकको रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले साउदी अरबमा समस्यामा परेका नेपाली र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका समग्र नेपालीका विषयमा चासो राख्नु अर्थपूर्ण छ । किनकि समस्या पर्नुअघि वा पर्दा यस किसिमको चासो विगतका प्रधानमन्त्रीहरुबाट भएको देखिदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र भनाइबाट वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रप्रति उहाँको चासो छ भन्ने संकेत स्वत दिन्छ । हिजोसम्म विदेशका कुनै कम्पनीमा कामदार समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि मेनपावर कम्पनीलाई निर्देशन दिने चलन थियो । तर साउदीको समस्या मेनपावरले मात्र समाधान गर्न सक्दैनन् तथा साउदीको अर्थतन्त्रमै परेको असरका कारण हाम्रा कामदार पनि प्रभावित भए भन्ने महशुस स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भयो । मलाई लाग्दैन हाम्रो व्युरोक्रेसी लेबलको सोचाई यस्तो छ भनेर । अहिले सरकार प्रमुखबाट जुन किसिमको चासो बढेको छ यस्तै स्प्रीटमा श्रम मन्त्रालयले पनि काम ग¥यो भने वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र चाँडै नै व्यवस्थित बन्छ ।
साउदी अरबमा देखिएको समस्या एकाएक निम्तिएको त होइन होला । फेरि कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटको असर साउदीको अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहला भन्न सकिन्छ र ?
हो, तपाइले भनेजस्तो साउदीको समस्या एक्कासी उब्जीएको होइन । कच्चा तेलमा आएको गिरावटको असर बिस्तारै देखिन थालेको छ । यसले जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनीमा कामदार पठाउन हुँदैन भनेर व्यवसायीहरुलाई पनि पाठ पढाएको छ । साउदीको समस्या विस्तारै कतार, युएई, बहराइनलगायतका खाडी मुलुकमा पनि नदेखिएला भन्न सकिदैन । कतारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँका कतिपय कम्पनी र प्रोजेक्ट ‘होल्ड’ भएर बसेको अवस्था छ । तर त्यो समस्या भनेको कामदारको तलब बैंकिङप्रणाली मार्फत नगर्ने कम्पनी तथा केही प्रोजेक्टमा छ जसलाई सरकारले नै होल्ड गराएको हो । तेलको मुल्यमा आएको गिरावटले खाडीका थुप्रै कम्पनीहरुमा असर पर्ने निश्चित छ । त्यसैले हामी व्यवसायीले पनि अब सजक भएर कामदार पठाउन आवश्यक छ । डिमाण्ड पाइयो भन्दैमा जस्तोपायो त्यस्तो कम्पनीमा पठाउँदा भोलि समस्या हामीलाई नै पर्ने हो ।
तर, साउदीको समस्याबाट सरकारले पनि ठुलो पाठ सिक्न जरुरी छ । त्यो हो वैदेशिक रोजगारको विकल्प । वैदेशिक रोजगार रोकेर रोक्न सकिन्न । तर अब स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिनुपर्छ । देशमै कलकारखाना तथा उद्योगघन्दा खोल्नका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । गोरखकालि टायर, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना किन बन्द भए र यी बन्द हुँदा कति क्षति व्यहोर्नु परेको छ भनेर सरकारले मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । श्रम मन्त्रालय मातहतको सीप विकास तालिम केन्द्र रुग्ण उद्योग जस्तै बनिसक्यो । न त्यहाँ सीप सिकाइन्छ न केन्द्रले अरु केही काम नै गरिरहेको छ । कम्तीमा स्वदेशमै सीपमूलक तालिम दिन सरकारले अग्रसरता लिए हाम्रा युवा विदेशिनै परे पनि राम्रो कामका लागि त विदेशिन्थे नि ! नारामा मात्र मुलुक समृद्ध बनाउने र अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति भनेर हुन्छ र ? देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्ने युवाहरुलाई खाडी पठाउँने अनि कसरी हुन्छ आर्थिक क्रान्ति ? त्यसैले अब भनेको युवाहरुलाई सीपमूलक तालिम दिने र कम्तीमा पनि १२÷१५ हजार बराबरको रोजगारी स्वदेशमै उपलब्ध गराउने गरी रोजगार नीति बनाउँनुपर्छ ।
तर तपाइले भनेजस्तै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन थालेभने तपाइहरुको रोजिरोटी खोसिएलान नि ?
झट्ट हेर्दा सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना ग¥यो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको रोजीरोटी गुम्छ भन्ने लाग्ला । तर, सवाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र यीनमा आश्रित केहीको रोजगारीको मात्र हो कि मुलुकलाई आर्थिक समृद्ध बनाउने भन्ने हो । हामीलाई पनि परिवारबाट अलग्याएर युवाहरुलाई विदेश पठाउन मन छैन । तर स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा परिवार पाल्न विदेशिनुको विकल्प रहेन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने हो भने हामी व्यवसायी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार छांै । हामी स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्नेछांै । यहाँ जलविद्युत, कृषि, पर्यटनलगायत के कुराको सम्भावना छैन र । तर ति संभावनालाई संभव बनाउन सरकार नै अग्रसर नहुन्जेलसम्म वैदेशिक रोजगार कसरी रोकिएला र ?
स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहँुदासम्म वैदेशिक रोजगारी रोकेर रोकिन्न । तर २ दशक अघिदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित हुनुको सट्टा झनझन अव्यवस्थित हुँदै गएको देखिन्छ । यसको मुख्य दोषी त तपाइहरु पनि हो नि ?
यसमा व्यवसायीहरु पनि दोषी छन् । वैदेशिक रोजगार पेशा–व्यवसायलाई सम्मानित बनाउँनुपर्छ भन्ने सोच थोरै व्यवसायीहरुमा मात्र रह्यो । उता केहीले यो पेशालाई बदनाम गराउँदै पैसा कमाउन मात्र खोज्दा समस्या बढेको पक्कै हो । हो, कामदार पठाउने क्रममा हामीबाट पनि केही गल्ति भए होला त्यसलाई नकार्न सकिन्न । तर एकपल्ट गल्ति भयो अब गल्ति दोहोरिदैन भन्दा सच्चिने मौका दिनेकी नदिने ? खराव काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ यसमा कसैको दुइमत छैन् । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहँना हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले परिस्थिति यस्तो बन्यो कि ‘बोल्यो कि पोल्यो’ भनेजस्तो । अहिले मैले अन्तर्वार्तामा बोलेका कुराहरुलाई लिएर व्यवसायीले मात्र होइन नियमनकारी निकायले पनि फोन गर्नेछन् । मेरो संस्थाप्रति निगरानी बढाइन्छ यसमा ढुक्क हुनुहोस् । यहाँ त राम्रो काम गर्दा र सही बोल्दा पनि डराउनुपर्ने स्थिति आयो । हामी नियम कानुन बमोजिम चलेका थिएनौ भने हिजो पनि त नियमन गर्ने निकाय थियो नि ! हिजो चाँहि के हेरेर बसेका थिए ति निकायहरु अनि आज एकाएक वैदेशिक रोजगारलाई चौतर्फि निशानामा पार्ने ?
वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम स्वीकृति लिएर संचालनमा रहेका संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । हुन सक्छ कर लगायत केही केशमा अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायले हेर्न सक्छन् । तर हरेक घटनालाई वैदेशिक रोजगारसँग जोडेर हामीमाथि त्रास फैलाउने काम नहोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको धारणा हो । तर्साएर, धम्क्याएर समस्याको समाधान हुँदैन । विदेशिने कामदारलाई न्यूनतम शुल्कमा अझ भन्नुपर्दा एक पैसा पनि नलिएर रोजगारदाता कम्पनीबाटै सेवाशुल्क लिएर विदेश पठाउने हाम्रो पनि चाहँना हो । समग्रमा भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित बनाउन व्यवसायी र सरकारबीच समन्वय हुनु जरुरी छ ।
सरकारी पक्षबाट के भइदियो भने वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित हुन सक्छ त ?
पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगार ऐन समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ । २०६४ मा बनेको ऐनले अहिलेको समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र चल्न गाह्रो छ । अर्को कुरा कागजमा फ्री भिसा फ्री टिकट लेख्दैमा वैदेशिक रोजगार निःशुल्क हुने होइन । विदेशिने कामदारसँग एक पैसा लिन पाइदैन भनेर सरकार भन्छ अनि तिनै विदेशिने कामदारसँग अनेक वहानामा पैसा असुल्ने छुट किन दिन्छ ? एउटा कामदार दुरदराजबाट मेनपावरसम्म आइपुग्दा कति ठाँउमा ठगिइसकेको हुन्छ, के त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छ ? हामीलाई १० हजारभन्दा बढि लिन पाइदैन भन्ने सरकारले विदेशिने नागरिकसँग राहदानी बनाउदा १५ हजारसम्म कुन आधारले लिने ? उता मलेसिया रोजगारीकै कुरा गर्ने हो भने भिएलएनको नाममा ३५ सय, बायोमेट्रिक मेडिकलको नाममा ४५ सय, झन अहिले त मेडिकल अगावै प्रोसेसिङका नाममा ३ हजार तिर्नुपर्छ । हाम्रा नागरिकले विदेशिने नाममा बढी पैसा तिर्दैनन् भनेर किन गन्तव्य मुलुकसँग सरकारले वार्ता गर्न सक्दैन । गन्तव्य मुलुकले नभई केही बिचौलिया र माफियाले विभिन्न वहानामा कामदारसँग शुल्क असुल्ने छुट किन दिइन्छ ? अहिलेसम्म सरकारले रोजगारीका लागि जतिवटा मुलुक खुल्ला गरेपनि ती मुलुकमा आफ्ना नागरिकले पाउने सेवासुविधाका विषयलाई लिएर श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन् ।
अर्को कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीप्रति सरकारको नजर नै विभेदकारी छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत पनि योगदान नरहेको क्षेत्रलाई सीआइपी सम्मानबाट सम्मानित गर्ने सरकारले वार्षिक ४ लाखभन्दा बढि नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाई हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सम्मान त परै जाओस समान नजरले समेत हेरिदैन । अझ राज्यले यी व्यवसायीहरुलाई ठगको उपमा समेत भिराउँछ । यही हो त राज्यले हामी व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहार ?
तर तपाईहरुका आवाज बुलन्द बनाउन तपाइहरुकै छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि त अग्रसरता लिनुप¥यो नि ?
हिजो चुनावको समयमा भोट माग्न व्यवसायीका घरघरमा आउने नेताहरु चुनाव जितेर गएपछि समस्या प¥यो भनेर फोन गर्दा समेत उठाउँदैनन् । यस्ता संघका कुरा के नै गर्नु र ! अर्को कुरा संघले व्यवसायीका गुनासो सुन्ला, वैदेशिक रोजगारका अफ्ठयारा फुकाउन सरकारसँग समान हैसियतमा वार्ता तथा छलफल गर्ला भन्ने आशा व्यवसायीहरुलाई छैन । झन अहिलेका अध्यक्षलाई त यसअघि नेतृत्वको अनुभव नभएकोले पनि होला आसपासका २÷४ जना व्यवसायीको लहैलहैमा अघि बढिरहनुभएको छ । अध्यक्षको त आफ्नो भिजन हुनुप¥यो नि ! आज मैले यो काम गर्ने, भोलि यो गर्ने, मेरो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा यी–यी सुधार गरेर देखाउछु भन्ने खै उहाँको योजना ? उहाँ निर्वाचित भएर आएको १ वर्ष वितिसक्यो आजसम्म व्यवसायीको हितमा के काम गर्नुभयो उहाँले ? पूर्वअध्यक्ष, सल्लाहकार, अग्रज व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर एउटा रणनीति बनाएर अघि बढनुपर्नेमा उहाँ आफैलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन् ।
तर अहिले त्यहि संघको नेतृत्व र अन्य अग्रज व्यवसायीहरु आफु अनुकुलको श्रममन्त्री बनाउन लबिङ गर्दै हिडिरहेका छन् रे नि त ?
वैदेशिक रोजगार बुझेको र यस क्षेत्रका मान्छेहरुसँग नजिकको सम्वन्ध भएको मन्त्री आए त राम्रै हो तर केही व्यवसायीले लविङ गर्दैमा र नेताहरुलाई भेट्दैमा उनीहरुले चाहेको व्यक्ति श्रममन्त्रालयमा आउँछन भन्नु हाँस्यास्पद हो । हामीले पनि ती व्यवसायीका हैसियद बुझेका छौं । नेताका पीएलाई अनुनय विनय गरी बल्लबल्ल पाएको दर्शनभेटलाई सामाजिक संजालमा फोटो हालेर वैदेशिक रोजगारीका विषयमा छलफल गरियो भनेर लेखेको देख्दा हासो उठ्छ । हिजोका दिनमा फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय लागू गराइदा यसको पुनर्विचारका लागि श्रमराज्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुको साटो शिर्ष तहबाटै निर्णय उल्ट्याउने बताउने उनीहरुको हैसियद त आजको दिनसम्म केही गर्न नसकेको अवस्थाले नै छर्लङग पार्छ । हाम्रा व्यवसायी नेताहरु कामभन्दा हल्ला बढि गर्नेबाहेक केही गर्नै सक्दैनन । आफु अनुकुलको श्रममन्त्री ल्याउन लबिङ गरिरहेका छौं भन्नु र हुट्टिट्याउले आकास थामेको छु भन्नु एउटै हो ।